Ny Tsiambaratelon’i Ejipta an-dahatsary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Desambra 2018 15:49 GMT
Namana an'i LondonBrad
Avy any Ejipta, lahatsary manala ny saron'ireo tsiambaratelo sy ireo marina mahatsiravina. Miezaka manohina ny mpanana mba hihetsehany ny iray amin'izy ireo, Hideous, amin'ny fampisehoana ny fifanoherana eo amin'ny fiainan-dry zareo tsy mivaky loha sy ny fahantrana eny an-dàlambe. Eo ihany koa ny To H.E Mrs Suzanne Mubarak, hira sy lahatsary natolotra amim-panajana ho an'ny Vadin'ny Filoham-pirenena Ejipsiana, mitatitra ny tantaran'ny fanararaotana ankizy, ny herisetra ataon'ny mpitandro filaminana ary ny fahantrana lalina.
Mandeha eny an-dàlamben'i Ejipta isan'andro i Nader G. EL-Attar ary nahatsikaritra, efa fotoana maromaro izao, ny fifandraisana eo amin'ny mpanana anatin'ity firenena ity sy ny mahantra, ary indrindra ny fomba fifaneraseran'ireo saranga roa mifanao atsimo sy avaratra ireo. Noresahany tamin'ny namany, Rienne Gamal, izany, ary izy ireo miaraka no namokatra ny lahatsary “Hideous” navoakany tao amin'ny pejy facebook-ny, izay hananany lahatsary hafa ihany koa. Ao anatin'ny Hideous, lahatsary iray azonao jerena eto (rohy maty), mampiseho ny fifanoherana eo aminà fomba fiaina roa samy hafa i Nader G. EL-Attar sy i Rienne Gamal. Tanaty mailaka, nanontaniako izay nanosika azy hanao io lahatsary io i Nader. Namaly ahy izy:
…ny zavatra hita ankehitriny dia vondrona vahoaka manan-karena, izay anjakan'ny harena tanteraka…sy vahoaka mahantra mijery ireo olona manan-karena ireo ary manontany tena hoe “nahoana isika no avelan'izy ireny ho irery…inona no nataontsika…?” Ny mahavariana dia ny fomba fijerin'ireny olona ambony saranga ireny an'ireto vahoaka ireto amin'izao fotoana…ny ankamaroany mihevitra fa adalàny no nampahantra azy, satria tsy manao afa-tsy ny mangata-bola amin'ny hafa izy ireny… tsy miasa ihany koa [izy ireny], manadino fa anatin'ity firenena tendan-kanina, mpikatsaka vola, notontoloana, mpanangon-karena ity, tsy misy toerana ahafahan'ireny olona ireny miasa…aiza no ahafahanà bandy tsy mahay mamaky teny sy manoratra ary mahantra miasa ankehitriny???
Anatin'ilay sarimihetsika, manaraka ireo sary maro loko mampiseho ireo toeram-pivarotana goavana, trano fisakafoana, fandraisana mari-pahaizana, fety, tranobe mirentirenty sy morontsiraka ireo sary mainty sy fotsy maneho olona matory an-dàlambe, ankizy miasa sy mpangataka mipetraka eny an-jorony, tsy raharahian'ireo mpandalo. Mametraka fanontaniana mihitsy io sarimihetsika io any amin'ny farany: raha ireo sary tany am-boalohany, mampiseho ny fiainana mahafinaritra, no “mandratra saina”, na ireo sary tany amin'ny tapany faharoa. Mametra-panontaniana amin'ny anjara toeran'ny governemanta sy ny fanapenany maso amin'ity olana ity i Nader:
…nanana ity sarinà ankizilahy kely telo manosika daba-pako ity koa aho…ary teo dia nanontany tena aho hoe fa aiza ny Vadin'ny Filoham-pirenena??? miaraka amin'ny resany rehetra momba ny ankizy eny an-dàlambe!!!!
Manana holazaina amin'ny vadin'ny filoha ihany koa ilay bilaogera Ejipsiana sady mpanakanto, Ahmad Sherif. Nanapa-kevitra ny hanao izany anatinà hira sy lahatsary navoakany tao amin'ny YouTube izy, mitondra ny lohateny “To H.E Mrs Suzanne Mubarak/إلي سيدتي سوزان مبارك.” Manoratra izao izy ao amin'ny mombamomba ilay lahatsary:
Tantara marina momba ny Herisetra ataon'ny Mpitandro filaminana Ejipsiana, ny fanararaotana ankizy sy ny fahantrana lalina. Atolotra ho an'i “Ramatoa Hajaina Suzanne Mubarak, Vadin'ny Filoham-pirenena Ejipsiana. Amim-panajàna.
Dikateny Malagasy an'ireo tonony: “Ramatoa Mubarak, niara-niseho taminao tanaty fahitalavitra aho. Ankizikely bitika, faly ary pelipelika. Nibitsika teny mamy tanaty sofiko ianao… ireny no andro mamiratry ny ‘Wafa sy Amal’ (fanamarihana: Fandaharanasa Fiarovana ny Ankizy izay ny Vadin'ny Filoham-pirenena Ejipsiana no solontenany). Aza tezitra amin'ity hira ity. Mino aho, Rtoa Mubarak, fa mitondra tenim-Pahafahana izy ity. Indray andro, nisy ankizy iray nantsoina hoe Shaaban. Efa maty ny reniny, kamolahy kosa ny dadany ary ny zokiny lahy roa mpivarotra rongony anatinà tarika iray. Ny masoko izao mihitsy no nahita azy nitsentsitra ny sisanà ampongabendanitra (fanamarihana: voankazo ejipsiana) izay nalainà amboa tanaty fako miandrona. Ry Vadin'ny Filohako: Shaaban firy tapitrisa no miaina aty Ejipta? Tsy mbola nahita azy teny akaikinao aho, tanaty fahitalavitra. Ry Vadin'ny Filohako, Shaaban firy tapitrisa no tsimponin'ireo mpitandro filaminana ary hararaotiny anatin'ireo tobin'ny mpitandro filaminana an'ny vadinao hajaina? Fiverenana, amin'ny teny maro: Te ho ankizy aho, te hisakafo, te hianatra, te hana-namana, te hotiavina, tsy te hatahotra, te hilalao, te hanana trano sns.”
Manana lahatsary maro hafa i Ahmad Sherif ao amin'ny fantsony YouTube, maro amin'izy ireny no nokendrena haparitaka amin'ny finday. Resahany anatin”ilay lahatsary eto ambany hoe Ajanony ny Esoeso momba ny Niqab, atomboy ny fifanakalozankevitra, ny fifanjevoana any Angletera ateraky ny vehivavy mitafy Niqab, voaly manarona ny tava sy ny vatana iray manontolo, sy ny tokony hametrahana izany ho safidy. Anatin'ny Fitiavana Malalaka: dia maninona? Mubarak Ejiptaالحب : وماله ؟ / مبارك, maniry ny haneken'i Ejipta ny firaisana ara-nofo alohan'ny fanambadiana izy, ho fomba iray hialàna amin'ireo tranganà fanafihana ara-nofo sy fanolanana any Caire. Ity manaraka ity ny Ajanony ny Esoeso momba ny Niqab.
Lahatsary iray mety hojerenao hahitanao bebe kokoa ireo fiainana indraindray miafina an'ireo vehivavy any Ejita maoderina ny To Feel Cold (Fahatsiarovana Mangatsiaka), lahatsary fanadihadiana maharitra 51 minitra ary ambanin'ny fahazoandàlana Creative Commons, novokarin'i Hala Lotfy.